Izikhangibavakashi Star Ukuze Ukuvakashela i-Vatican City | Londoloza Isitimela
Ikhaya > Izeluleko Zokuhamba Ngezitimela > Izikhangibavakashi Star Ukuze Ukuvakashela i-Vatican City
(Kugcine ukubuyekezwa On: 30/10/2020)
Uma uhlala e-Europe futhi sowunegama ngempelasonto onga (noma yonke ngesonto!), ukusho “yebo” ukuze Ukuvakashela i-Vatican City nge wesitimela futhi ukuyithanda ngesikhathi isivinini okugcwele!
Ukuhlela ku Ukuvakashela i-Vatican City?
Kusukela 1929 iVatican bekulokhu geqe kanye eyodwa encane kunazo zonke emhlabeni. namanje, ukuthi akuzange kulunciphise inkazimulo yayo, ubuhle, futhi yayo kakhulu idolo kwamasiko kanye zomlando ukubaluleka. Nakuba esithathe phezu nje 0.44 amakhilomitha square, IVatican’s inezinto eziningi ezikhangayo okufanele zigcinwe izivakashi umatasa: kusukela St. Basilica sikaPetru eSistine Chapel (nakho konke okunye phakathi), ozokuthanda ngomzuzwana wachitha in the Vatican.
Ngokwazi Ukuvakashela i-Vatican City nge wesitimela uya, kukhona yesimanje isitimela kagesi etholakalayo bonke abathanda Vatican. Isitimela sixhuma iVatican City sesitimela with the Pontifical Villas.
Nazi izinto ezimbalwa inkanyezi ezikhangayo eVatican ufuna ukuvakashela futhi uthole iningi Italy umuzwa wakho.
Ubuhle St. Basilica kaPetru mhlobiso of Vatican, olwakhiwa ngalokho kucatshangwa ukuthi lapho St. Peter ngengcwaba.
St. KaPetru Basilica kuyinto cishe isamba umsebenzi abaculi abadumile '. Kasibili ezikushiya yesiteleka, ubuciko e St. Basilica kukaPetru iqala ngaphambi bangena esontweni. Uzoba siqale sibone esifanekisweni kukuyo sika of Constantine kanye izinsalela KaMose Giotto sika ngenhla nasekhothameni main. Bona umusa kuvulandi, futhi kwethempeli eside futhi 46M ubude 185m ikhuphukela Dome 119 amamitha ngenhla! Ngokwemvelo, kukhona futhi Pieta kaMichelangelo adumile ukuthi ngeke bakholwe amehlo akho! Bheka Chapel ngokucebile ahlotshiswe Sacrament, omangalisayo Baroque zethusi Baldacchino kukuyo sika, altare kapapa kanye nokunye okuningi.
Rimini eRoma Izitimela
Verona eRoma Izitimela
Ziyamangalisa e kwesokudla ayo, the eSistine Chapel kungobunye site uzothola ukubona uma bavakashela iVatican City ngesitimela. Lakhiwa uPapa Sixtus IV e 1473-84 futhi zibuyiselwe kusukela 1980 ukuze 1994, ESistine Chapel kunesithembiso nemidwebo abadwebi abaningi. Ingabe amagama Michelangelo, Perugino, Pinturicchio, Botticelli, Rosselli, Ghirlandaio, futhi Signorelli lutho? Awu, basiza ukwenza ezindongeni eSistine Chapel esiqongweni Umdwebo Renaissance. Lokwahlulela kaMichelangelo Kugcine ngesineke ngaphakathi Chapel kubhekwa impumelelo okukhulu kakhulu futhi okuphawulekayo kakhulu yobuciko European.
ESistine Chapel kulapho conclave ukukhetha uPapa Kunenkolelo. Daily, amakhulu izivakashi usithande, futhi - ungaba omunye kubo, kakhulu!
Omunye izinto ezihamba phambili mayelana Ukuvakashela i-Vatican City ngesitimela ukuthi ikuvumela ukubona cishe zonke nokuzwa kubalulekile in the Vatican.
Iminyuziyamu yaseVatican ifaka ukuhlelwa okuhlelekile okuhlelwe okwenziwe uPopu Clement XIV noPius VI kusuka 1769 ukuze 1799. Lezi zemibukiso bayifa-afihlekile zezinhlamvu abalulekile nokugqamisa ambalwa nje kunzima kakhulu! Ngamunye inokuthile esiyingqayizivele ukunikela:
Sala a Croce Greca ulindele ngokucebile ukuhlotshiswa obomvu porphyry sarcophagi yendodakazi uConstantine, Constantia, nonina
Sala delle Muse libonisa Belvedere Torso, umsebenzi ekhulu lokuqala-BC Michelangelo-bayahlonishwa Apollonius of Athens
Gabinetto delle Maschere has a phansi ekhazimulayo KaMose buso waseshashalazini kusukela Villa Adriana e Tivoli
Cortile del Belvedere ophethe Apollo Belvedere, omunye eziqoshiwe edume kakhulu Vatican
Galleria delle Statue izici candelabras ayetholakala lasendulo – the Barberini Iziboshwa – futhi kusukela Villa Adriana at Tivoli
Siena eRoma Izitimela
Lucca eRoma Izitimela
I-Pontifical Villa Barberini
Pope kuyo ehlobo, I-Pontifical Villas – Barberini Gardens bekulokhu wumphakathi kusukela Mashi 2014. Nomnyango uhlobo nzima ukuthola njengoba hhayi signposted. Izingadi yale ndawo ebabazekayo isiphelile 2000 ubudala, elaliqhibuka phezu amazinga amathathu. Ziyakwazi emangalisa futhi kahle ebekwe, futhi ezingeni lokugcina libonisa lwezimpawu of opapa ahlukahlukene Boxed e Hedges.
Ukujabulela uhambo lwakho ngenkathi uvakashela iVatican City ngesitimela, Sesha imvelaphi yakho bese ukhetha iRoma Londoloza zemininingwane website to book a ithikithi isitimela kungakapheli imizuzu kanye uqale amadlingozi yakho Vatican ngokushesha kunokuba ufisa kulindeleke!
Ingabe ufuna ukushumeka kokuthunyelwe kwebhulogi ungene kusayithi lakho, bese uchofoza lapha: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fvisiting-vatican-rail%2F%3Flang%3Dzu- (Skrolela phansi ukuze ubone Shumeka Ikhodi)
Uma ungumnikazi kuwebhusayithi, ungaxhuma yethu Londoloza Isitimela Ishanthika.
#vatican roma Izincwajana zemininingwane Izikhangibavakashi ukuhambahamba travelrome vaticancity